खगोल विज्ञान - नेट मा मौसम विज्ञान नेटवर्क मौसम विज्ञान
खगोल विज्ञान यो एक साँच्चिकै रोमाञ्चक विषय हो जुन हामीलाई दिनहुँ अचम्म गर्न छोड्दैन। यो विज्ञान हो जुन ताराहरू, ग्रहहरू र सामान्य रूपमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्दछ। यसको व्युत्पत्तिको अर्थ "स्टारगजिing" हो। यी आकाशीय पिण्डहरू पृथ्वीबाट दैनिक खगोलविद्हरू र वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डको गठन र यसको सञ्चालनको व्याख्या गर्न खोज्नेहरूद्वारा मनाइन्छन्।
आकाशीय पिण्डहरूको स्थिति, संरचना र चाल थाहा पाउन त्यहाँ धेरै अवलोकन विधिहरू छन्। धेरै जसो अध्ययनहरू गरिन्छन् त्यसमा केन्द्रित छन् कि त्यसले कसरी हाम्रो ग्रहलाई असर गर्न सक्छ।
सब भन्दा पुरानो सभ्यताहरूले खगोल विज्ञानलाई पौराणिक कथा, देवीदेवता र धार्मिक विश्वास सम्बन्धित अन्य प्रश्नहरूको बारेमा व्याख्या गरे। यो भएको थियो लामो यात्रा को कारण। टेक्नोलोजी र ज्ञानको प्रगतिमा धन्यवाद, यो ज्ञात छ कि पृथ्वी केवल अर्को आकाशीय पिण्ड हो र हामी ब्रह्माण्डको केन्द्र होइनौं। ब्रह्माण्ड असीमित छ र आकाशगंगा, सूर्य, ताराहरू, अधिक ग्रह, चन्द्रमा, उल्का पिण्ड, धुलो, ट्रेल्स, र एस्टेरोइड मिलेर बनेको छ।
टेलिस्कोप द्वारा योगदान गरिएको ग्यालिलियोले यो खगोलविद्यामा सबै भन्दा उपयोगी उपकरणहरू मध्ये एक थियो। आज, प्रविधिको प्रगतिको साथ, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र आकाशीय पिण्डहरूको युगको बारेमा स्पष्ट जवाफ दिन सकिन्छ। खगोलविद्हरूले हाम्रो ग्रहको विज्ञानमा मूल्यवान जानकारी दिएका छन् र निरिक्षणको समान विधि प्रयोग गर्न जारी राखेका छन्।
तिनीहरू सामान्यतया राज्यबाट आर्थिक सहायता लिन्छन्, उनीहरूको महँगो लगानी संस्थाहरू द्वारा वित्तीय लगानी गरिन्छ जुन बढ्दो उन्नत उपकरणहरूको खरीद र आविष्कारको लागि जिम्मेवार छ र जटिल अनुसन्धान केन्द्रहरूको भुक्तान र डिजाइन जस्ता: नासा.
यस कोटीमा तपाइँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र यसको मूलको बारे मा आनन्द लिन र जान्न सक्नुहुन्छ। सौर्यमण्डलको काम देखि सबै ग्रहहरूको विशेषताहरु सम्म सबै भन्दा महत्वपूर्ण आकाशगंगा को माध्यम बाट पार र कालो छेद बेवास्ता। खगोल विज्ञानको जादू नभुल्नुहोस् र स्थानिक ज्ञानमा सामेल हुनुहोस्!
द्वारा जर्मन पोर्टिलो बनाउँछ १ दिन .
हाम्रो सौर्यमण्डल, वा ग्रह प्रणाली जसलाई यसलाई पनि भनिन्छ, विभिन्न प्रकारका आकाशीय पिण्डहरूले भरिएको छ,…
हाम्रो ग्यालेक्सीमा रहेको ब्ल्याक होलको छवि
द्वारा जर्मन पोर्टिलो बनाउँछ4दिन .
तीन वर्ष पहिले, घटना होराइजन टेलिस्कोप (EHT) को वैज्ञानिक समुदायले पहिलो तस्बिरको साथ संसारलाई चकित पारेको थियो।
ब्ल्याक होलले कसरी आवाज निकाल्छ?
पर्सियस ग्यालेक्सी क्लस्टरको केन्द्रमा रहेको ब्ल्याक होल सन् २००३ देखि ध्वनिसँग सम्बन्धित छ...
स्टीफन हकिङ, युरी मिल्नर र मार्क जुकरबर्गले ब्रेकथ्रु स्टारसट नामक नयाँ पहलका लागि निर्देशक बोर्डको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसको...
एक कक्षा के हो
जब हामी खगोल विज्ञान, सौर्यमण्डल र ग्रहहरूको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी सधैं कक्षाको बारेमा कुरा गर्छौं। तर, सबै…
हामी सौर्यमण्डल भित्र रहेको एउटा ग्रहमा बस्छौं, जुन फलस्वरूप अरूले घेरिएको छ...
कसरी एक टेलिस्कोप काम गर्दछ
द्वारा जर्मन पोर्टिलो बनाउँछ3हप्ता .
टेलिस्कोप एक आविष्कार थियो जसले इतिहास भर खगोल विज्ञानको ज्ञानमा क्रान्ति ल्यायो। प्रयोग गर्दै…
हामी किन सधैँ चन्द्रमाको एउटै पक्ष देख्छौं?
द्वारा जर्मन पोर्टिलो बनाउँछ4हप्ता .
हामी सबैलाई थाहा छ कि चन्द्रमाले हामीलाई सधैं एउटै अनुहार देखाउँछ, त्यो हो, पृथ्वीबाट हामी सक्दैनौं ...
द्वारा जर्मन पोर्टिलो बनाउँछ4महिना .
हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो ग्रहमा धेरै प्रकारका सौर्यमण्डलको गति छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक र त्यो…
द्वारा जर्मन पोर्टिलो बनाउँछ5महिना .
वसन्त रात र प्रारम्भिक गर्मीमा, पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा कुनै पनि पर्यवेक्षकले नोटिस गर्नेछ ...
सौर्य आँधीहरू समय-समयमा सूर्यमा बारम्बार हुने घटनाहरू हुन्। तिनीहरू सामान्यतया आवधिक र ...
पानस्पर्मिया सिद्धान्त जीवनको उत्पत्ति के हो?